“Unyamezelo Lwenu Malupheleliswe”—Yakobi 1:4
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Isoko Isi-Itali IsiAukan IsiBaoule IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBiak IsiBislama IsiCambodia IsiChitonga IsiChokwe IsiChol IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiDangme IsiDrehu IsiEfik IsiEwe IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGreenland IsiHausa IsiHmong (White) IsiJavanese IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikongo IsiKiluba IsiKimbundu IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLaotia IsiLingala IsiLunda IsiLuvale IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMixe IsiMizo IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdonga IsiNgabere IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNigerian Pidgin IsiNyaneka IsiNzema IsiOtetela IsiPhuthukezi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiSaramaccan IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiTahiti IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTwi IsiTzeltal IsiUmbundu IsiUrhobo IsiUruund IsiVenda IsiWayuunaiki IsiWelsh IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
“Ngoko ke unyamezelo lwenu malupheleliswe, ukuze nibe ngabapheleleyo nabaphilileyo kwiinkalo zonke, ningaswele nto.”—YAKOBI 1:4.
IINGOMA: 135, 139
Yintoni eza kukunceda unyamezele?
Ngoobani abayimizekelo emihle yonyamezelo?
Kuthetha ukuthini ukuvumela ‘unyamezelo lwethu lupheleliswe’?
1, 2. (a) Yintoni esinokuyifunda kwindlela uGidiyon namadoda akhe ayi-300 abanyamezela ngayo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.) (b) Ngokutsho kukaLuka 21:19, kutheni kubaluleke kangaka ukunyamezela?
ZAMA ukuzenzela umfanekiso-ngqondweni womlo onzima nodinisayo, owawuphakathi kwamajoni amaSirayeli awayekhokelwa nguMgwebi uGidiyon, kunye neentshaba zawo. UGidiyon namadoda akhe bawaleqa amaMidiyan namahlakani awo ubusuku bonke, kangangeekhilomitha eziyi-32! IBhayibhile isixelela ngoko kwalandelayo, isithi: “UGidiyon weza eYordan, wayiwela, yena namadoda angamakhulu amathathu awayekunye naye, bediniwe.” Kodwa babengekoyisi, ibe kwakusafuneka balwe namajoni ayi-15 000. Ekubeni amaSirayeli ayesele eneminyaka ecinezelwe zezi ntshaba, babengenakukwazi ukuncama. Ngoko, uGidiyon namadoda akhe baqhubeka bezileqa ezi ntshaba, bada ekugqibeleni bazoyisa!—ABagwebi 7:22; 8:4, 10, 28.
2 Nathi silwa umlo onzima nodinisayo. Ezethu iintshaba ziquka uSathana, ihlabathi lakhe, kunye nokungafezeki kwethu. Abanye kuthi sele beniminyaka eliqela bejijisana nezi ntshaba. Ngoncedo lukaYehova, mininzi imilo esele siphumelele kuyo. Sekunjalo, asikoyisi ngokupheleleyo. Ngamanye amaxesha sisenokudinwa kukulwa. Okanye, sisenokudinwa kukulinda ukuba kude kupheliswe le nkqubo yezinto. UYesu wasilumkisa ukuba siza kuvavanywa size sitshutshiswe ngokuqatha kule mihla yokugqibela. Kodwa wasixelela nokuba, ukuba siyanyamezela, siza kuphumelela. (Funda uLuka 21:19.) Kuthetha ukuthini ukunyamezela? Yintoni eza kusinceda sinyamezele? Yintoni esinokuyifunda kwabo baye banyamezela? Ibe singaluvumela njani ‘unyamezelo lwethu lupheleliswe’?—Yakobi 1:4.
KUTHETHA UKUTHINI UKUNYAMEZELA?
3. Kuthetha ukuthini ukunyamezela?
3 EBhayibhileni, ukunyamezela kuthetha okungakumbi kunokumelana nemeko enzima okanye ukuyibetha ngoyaba. Kubandakanya nendlela esivakalelwa nesizijonga ngayo izilingo zethu. Ukunyamezela kusinceda sibe nenkalipho, sithembeke, size sibe nomonde. Enye incwadi yembekiselo ithi ukunyamezela luphawu olusinceda sibe nethemba eliqinileyo size siphephe ukunikezela xa sijamelene nezilingo. Kusinceda siqhubeke simile singagungqi nakwezona zilingo zinzima. Kwakhona, kusinceda siphumelele, size sihlale sicinga ngosukelo lwethu, kungekhona intlungu yethu.
4. Kutheni sinokuthi uthando lusinceda sinyamezele?
4 Uthando lusinceda sinyamezele. (Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 13:4, 7.) Xa kutheni? Ukuthanda uYehova kusinceda sinyamezele nantoni na ayivumelayo ukuba yenzeke. (Luka 22:41, 42) Ukuthanda abazalwana bethu kusinceda sikunyamezele ukungafezeki kwabo. (1 Petros 4:8) Ukuthanda amaqabane ethu omtshato kusinceda sinyamezele ‘imbandezelo’ efunyanwa nangabo bonwabileyo emtshatweni, kuze kusincede siqinise umtshato wethu.—1 Korinte 7:28.
5. Kutheni uYehova ekufanelekela ngokukhethekileyo ukusinceda sinyamezele?
5 Cela amandla kuYehova. UYehova ‘nguThixo onika unyamezelo nentuthuzelo.’ (Roma 15:5) Nguye kuphela oyiqonda ngokupheleleyo imeko, iimvakalelo kunye nemvelaphi yethu. Ngoko uyazi kakuhle eyona nto siyidingayo ukuze sinyamezele. IBhayibhile ithi: “Uya kukwenza oko kunqwenelwa ngabo bamoyikayo, nokukhalela kwabo uncedo uya kukuva, yaye uya kubasindisa.” (INdumiso 145:19) Kodwa uza kuyiphendula njani uThixo imithandazo yethu yokucela amandla okunyamezela?
UYehova usiqonda ngokupheleleyo, yaye uyazi kakuhle eyona nto siyidingayo ukuze sinyamezele
6. Njengoko esithembisile eBhayibhileni, uYehova unokuyeza njani ‘indlela yokuphuma’ esilingweni?
6 Xa sicela uYehova asincede sinyamezele isilingo, usithembisa ukuba uza ‘kwenza indlela yokuphuma’ kuso. (Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 10:13.) Ukwenza njani oko? Ngamanye amaxesha, usenokusisusa isilingo eso. Kodwa kumaxesha amaninzi, uza kusinika amandla ukuze ‘sinyamezele ngokupheleleyo size sizeke kade umsindo sinovuyo.’ (Kolose 1:11) Ngenxa yokuba uYehova ekuqonda kakuhle ukulinganiselwa kwethu ngokwenyama, ngokwengqondo nangokweemvakalelo, akasoze avumele isilingo sibe nzima kangangokuba side singakwazi ukuhlala sithembekile.
7. Zekelisa ukuba kutheni sidinga ukutya kokomoya ukuze sinyamezele.
7 Qinisa ukholo lwakho ngokutya kokomoya. Kutheni ukutya kokomoya kubalulekile? Masikuzekelise ngolu hlobo oku: Ukuze ubani anyuke intaba iMount Everest, kufuneka atye iicalories eziyi-6 000 ngosuku. Lo mlinganiselo ungaphezulu lee kunalowo udingwa ngumzimba womntu oqhelekileyo. Ukuze umntu onyuka intaba akwazi ukunyamezela aze afikelele usukelo lwakhe, kufuneka atye ukutya okunika amandla okanye iicalories ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Ngokufanayo, sidinga ukutya kokomoya okuninzi ukuze sikwazi ukunyamezela size sifikelele usukelo lwethu. Simele sizimisele ukuchitha ixesha sisenza ufundisiso lobuqu size siye nasezintlanganisweni. Oku kuza kusinceda sifumane oko sikudingayo ukuze sigcine ukholo lwethu lomelele.—Yohane 6:27.
8, 9. (a) Ngokutsho kukaYobhi 2:4, 5, yintoni ebandakanyekileyo xa sijamelene nezilingo? (b) Xa ujamelene nezilingo, nguwuphi umfanekiso-ngqondweni onokuzizobela wona?
8 Khumbula ukuhlala unyanisekile kuThixo. Xa sijamelene nezilingo, kukho okungakumbi okubandakanyekileyo kuneentlungu esizivayo. Ukunyaniseka kwethu kuThixo kuyavavanywa. Indlela esisabela ngayo ibonisa enoba uYehova simjonga njengoMlawuli wendalo iphela okanye akunjalo. Njani? USathana, utshaba lukaThixo oluphikisana nolawulo lwakhe, wamnyelisa uYehova ngokuthi abantu bamnqula kuba bezingca. Wathi: “Yonke into anayo umntu uya kuyinikela ngenxa yomphefumlo wakhe.” Waphinda wathi ngoYobhi: “Ngokwahlukileyo koko, khawuncede wolule isandla sakho, uchukumise ufikelele ethanjeni lakhe nasenyameni yakhe uze ubone enoba akayi kukuqalekisa ebusweni bakho na.” (Yobhi 2:4, 5) Ngaba uSathana waphinda wasitshintsha isityholo sakhe? Unotshe! Kwiminyaka emininzi kamva, xa waphoselwa ngaphandle kwasezulwini, wayesaqhubeka ebatyhola abakhonzi bakaThixo abathembekileyo. (ISityhilelo 12:10) Kunanamhl’ oku, uSathana usame ngelithi abantu banqula uThixo kuba bezingca. Ukunqwenela ngamandla ukusibona sigatya ilungelo likaThixo lokulawula size siyeke ukumkhonza.
9 Xa ujamelene nesilingo, zama ukuzizobela lo mfanekiso-ngqondweni. USathana needemon bakwelinye icala. Bakuthe ntsho befuna ukubona ukuba uza kwenza ntoni, bezixelele ukuba uza kunikezela. Ukanti kwelinye icala kukho uYehova, uKumkani wethu uYesu Kristu, abathanjiswa abavusiweyo kunye namawakawaka eengelosi. Bayabubona ubunzima ojamelene nabo, kodwa bakuqhwabel’ izandla! Bayakuvuyela ukukubona unyamezele yaye uthembekile kuYehova. Emva koko, uva uYehova esithi: “Yiba nobulumko, nyana wam, uze uyenze ibe nemihlali intliziyo yam, ukuze ndimphendule ondingcikivayo.”—IMizekeliso 27:11.
UYesu wacinga ngomvuzo wokunyamezela kwakhe
10. Unokumxelisa njani uYesu ngokucinga ngomvuzo wokunyamezela kwakho?
10 Cinga ngomvuzo. Masithi useluhambeni. Endleleni uza kunqumla emqolombeni. Uba ngajonga ngapha, kumnyama thsu. Kodwa uyazi ukuba xa uqhubeka uhamba usiya ngasekupheleni kwawo, kuza kukhanya kwakhona. Ubomi bunokufana nolo hambo. Usenokujamelana namaxesha anzima, ibe usenokuziva ngathi ziyakoyisa iingxaki zakho. NoYesu wayesenokuvakalelwa ngaloo ndlela. Xa wayebulawa kwisibonda sentuthumbo, wahlazeka ibe weva intlungu engathethekiyo. Eli kumele ukuba yayilelona xesha lakha lanzima ebomini bakhe! Yintoni eyamnceda wanyamezela? IBhayibhile ithi wayekhangele ‘kuvuyo olwalubekwe phambi kwakhe.’ (Hebhere 12:2, 3) UYesu wacinga ngomvuzo wokunyamezela kwakhe. Kwakhona wacinga nangeyona nto yayibaluleke nangakumbi kuye, indima awayeza kuyidlala ekungcwalisweni kwegama likaThixo nasekuxhaseni ilungelo lakhe lokulawula. Wayesazi ukuba eso silingo sasiza kugqitha, kodwa wona umvuzo wakhe emazulwini wawuza kuhlala ngonaphakade. Namhlanje, izilingo ojamelene nazo zisenokuba qatha zize zikuvise kabuhlungu, kodwa khumbula ukuba ziyagqitha.
“ABO BAYE BANYAMEZELA”
11. Kutheni simele sifunde kumava “abo baye banyamezela”?
11 Asisedwa. Ukuze umpostile uPetros akhuthaze amaKristu ukuba anyamezele izilingo ezisuka kuSathana, wabhala wathi: ‘Yimani ngokunxamnye naye, niqinile elukholweni, nisazi ukuba behlelwa kwaziimbandezelo ezifanayo nabazalwana benu bonke ehlabathini.’ (1 Petros 5:9) Amava “abo baye banyamezela” asifundisa indlela yokuhlala sinyanisekile, asiqinisekisa ukuba sinako ukuphumelela, yaye asikhumbuza nokuba siza kuvuzwa ngokunyaniseka kwethu. (Yakobi 5:11) Makhe siqwalasele imizekelo embalwa. —Jonga umbhalo osekugqibeleni.
12. Yintoni esiyifundayo kumzekelo weekherubhi ezabekwa e-Eden?
12 Iikherubhi ziingelosi ezinesigxina esiphakamileyo. Emva kokuba uAdam noEva bonile, uYehova wanika ezinye iikherubhi isabelo esitsha emhlabeni. Sasahluke kakhulu kweso zazinaso ezulwini. Umzekelo wazo unokusifundisa indlela yokunyamezela xa sifumana isabelo esinzima. IBhayibhile ithi uYehova “wamisa ngasempuma komyezo wase-Eden iikherubhi nencakuba yekrele enelangatye nejikajikayo ukuba iqhubeke ilinde indlela eya emthini wobomi.”  (Jonga umbhalo osekugqibeleni.) (Genesis 3:24) IBhayibhile ayithi ezi kherubhi zakhalaza okanye zacinga ukuba zazibaluleke kakhulu ukuba zinganikwa eso sabelo. Azizange zikruquke okanye zinikezele. Kunoko, zaqhubeka zisenza isabelo sazo de zasigqiba, mhlawumbi ngexesha loMkhukula, kwiminyaka engaphezu kweyi-1 600 kamva!
13. Yintoni eyenza uYobhi wakwazi ukunyamezela izilingo?
13 Indoda ethembekileyo uYobhi. Ngamanye amaxesha usenokukhathazwa yinto ethethwe ngumhlobo wakho okanye lilungu lentsapho. Mhlawumbi ugula kakhulu okanye ubuhlungu ngenxa yokufelwa ngumntu omthandayo. Sekunjalo, nokuba kwenzeka ntoni, umzeleko kaYobhi unokukuthuthuzela. (Yobhi 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) UYobhi wayengazi ukuba kutheni esuke wehlelwa zizilingo ezininzi, kodwa akazange anikezele. Yintoni eyamnceda wanyamezela? Okokuqala, wayemthanda uYehova ibe esoyika ukwenza nantoni na engamkholisiyo. (Yobhi 1:1) UYobhi wayefuna ukumkholisa uThixo, nokuba kubi okanye kuhle. Ukongezelela, uYehova wamnceda uYobhi wabona amandla akhe ngokumxelela ngezinye zezinto ezimangalisayo awayezidalile. Oku kwamqinisekisa nangakumbi uYobhi ukuba uYehova wayeza kuzisusa izilingo awayejamelene nazo, ngexesha elifanelekileyo. (Yobhi 42:1, 2) Yiloo nto kanye eyenzekayo. ‘UYehova wayijika imeko yokuthinjwa kaYobhi waza wakongezelela konke oko kwakukokukaYobhi, ngokuphindiweyo.’ “UYobhi wafa, aluphele yaye anelisekile.”—Yobhi 42:10, 17.
14. Ngokutsho kweyesi-2 kwabaseKorinte 1:6, umzekelo kaPawulos wokunyamezela wabanceda njani abanye?
14 Umpostile uPawulos. Ngaba ujamelene nenkcaso ekrakra okanye intshutshiso? Ngaba ungumdala webandla okanye umveleli wesiphaluka, ibe ucinga ukuba izabelo zakho zininzi kakhulu? Ukuba kunjalo, umzekelo kaPawulos ungakunceda. UPawulos watshutshiswa ngokuqatha, ibe wayesoloko ebaxhalabele abazalwana abasemabandleni. (2 Korinte 11:23-29) Kodwa uPawulos akazange anikezele, ibe umzekelo wakhe wabomeleza abanye. (Funda eyesi-2 kwabaseKorinte 1:6.) Nawe, xa unyamezela unokubomeleza abanye.
NGABA UNYAMEZELO LUZA ‘KUWUGQIBA UMSEBENZI WALO’ KUWE?
15, 16. (a) Ukunyamezela kumele kugqibe wuphi umsebenzi kuthi? (b) Zekelisa iindlela esinokuvumela ngazo unyamezelo lugqibe umsebenzi walo.
15 Umfundi uYakobi waphefumlelwa ukuba abhale oku: “Unyamezelo lwenu malupheleliswe [okanye “luwugqibe umsebenzi walo”], ukuze nibe ngabapheleleyo nabaphilileyo kwiinkalo zonke, ningaswele nto.” (Yakobi 1:4) Unyamezelo lunokuwugqiba njani umsebenzi walo kuthi? Xa sijamelene nesilingo, sinokufumanisa ukuba kufuneka sibe nomonde, umbulelo okanye uthando. Njengoko siqhubeka sinyamezela, siza kukwazi ukuzibonisa nangakumbi ezi mpawu, ibe ngaloo ndlela ubuntu bethu njengamaKristu buya kuphucuka.
Xa sinyamezela izilingo, ubuntu bethu njengamaKristu buyaphucuka (Jonga isiqendu 15, 16)
16 Ekubeni unyamezelo lunokusenza amaKristu alunge ngakumbi, ngoko asiyi kufuna ukwaphula umthetho kaYehova kuba nje sifuna ukuphuma esilingweni. Ngokomzekelo, ukuba unengxaki yokuba neengcinga ezingafanelekanga, musa ukunikezela kweso sihendo! Cela uYehova akuncede uzigatye ezo ngcinga. Ngaba uchaswa lilungu lentsapho? Musa ukunikezela! Zimisele ukuqhubeka ukhonza uYehova. Oko kuza komeleza intembelo yakho kuYehova. Khumbula: Ukuze uThixo akholiswe sithi, kufuneka sinyamezele.—Roma 5:3-5; Yakobi 1:12.
17, 18. (a) Zekelisa ukuba kutheni kubalulekile ukunyamezela kuse ekupheleni. (b) Njengoko isiphelo sisondela, yintoni esinokuqiniseka ngayo?
17 Simele sinyamezele, kungekhona nje ixesha elithile, kodwa kuse ekupheleni. Khawube nombono wenqanawa ezikayo. Ukuze basinde, abakhweli kufuneka badade bade baye kufika elunxwemeni. Ukuba umntu uyanikezela esaqala ukudada, uza kutshona. Ngokufanayo, umntu onikezelayo sele eza kufika elunxwemeni, uza kutshona. Ukuba sifuna ukuphila kwihlabathi elitsha, kufuneka siqhubeke sinyamezela. Masibe nesimo sengqondo esifana neso sikampostile uPawulos owathi: “Asiyeki.”—2 Korinte 4:1, 16.
18 NjengoPawulos, siqiniseke ngokupheleleyo ukuba uYehova uza kusinceda sinyamezele kuse ekupheleni. UPawulos wabhala wathi: “Siphumelela soyise ngokupheleleyo ngaye lowo wasithandayo. Kuba ndeyisekile kukuba nakufa nabomi nazingelosi narhulumente nazinto zilapha ngoku nazinto zizayo namandla nakuphakama nabunzulu naso nasiphi na esinye isidalwa aziyi kuba nako ukusahlula eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu iNkosi yethu.” (Roma 8:37-39) Yinyaniso kona ukuba siza kudinwa ngamanye amaxesha. Kodwa masibe njengoGidiyon namadoda akhe. Badinwa, kodwa abazange banikezele. ‘Baqhubeka nokusukela!’—ABagwebi 8:4.
^  (isiqendu 11) Uza kukufumanisa kukhuthaza ukufunda ngokunyamezela kwabantu bakaThixo banamhlanje. Ngokomzekelo, iNcwadi Yonyaka ka-1992, eka-1999, neka-2008, zineengxelo ezikhuthazayo ngabazalwana bethu base-Ethiopia, eMalawi, naseRashiya.
^  (isiqendu 12) IBhayibhile ayisixeleli ukuba zingaphi iikherubhi ezanikwa esi sabelo.